GNU / Linux Zvishamiso: Nyowani respin inowanikwa! Kupindura kana Distros? | Kubva kuLinux
Mune ino yekutanga positi yaMay, isu tichataura nezvayo «GNU / Linux Zvishamiso », UN Pindura (rarama uye unogadzikika uye yetsika snapshot) zvichibva pane iyo GNU / Linux Distro kudana «MX Linux », iyo yakagadzirirwa zvinangwa zvakasiyana kana zvinangwa.
Uye kutora mukana wekuti yakaburitswa zviri pamutemo nezuro, a mhando nyowani 2.3 (3DE4) pasi pe codename Yekupedzisira, zvakakodzera kuongorora nekupindura zvishoma pane zvataurwa Pindura.
1 Chii chinonzi Respin?
2 Nezve MX Linux
3 Zvishamiso GNU / Linux: Yega (isiriyo) wongororo yeMX Linux
3.1 Chii chinonzi MilagrOS?
3.2 Chii chitsva mune yazvino vhezheni yeMilagrOS GNU / Linux?
3.2.1 Zvakajairika maficha uye zvinangwa
3.3 Dhawunirodha, Kuisa, Shandisa uye Screenshots
3.3.1 A.- XFCE Desktop Nzvimbo
3.3.2 B.- Plasma Desktop Nharaunda
3.3.3 C.- LXQT Desktop Nzvimbo
3.3.4 D.- IceWM Windows Maneja
3.3.5 E.- FluxBox Windows Maneja
3.3.6 F.- OpenBox Windows Maneja
4 Kupindura kana Distros?
Chii chinonzi Respin?
Asati apinda zvizere kuti ataure nezvake Pindura «Zvishamiso GNU / Linux», zvakakosha kujekesa zvakare kuti iri Pindura. Kune izvi, tinokurudzira rinotevera bhuku rapfuura:
"Nzwisisa Respin, bootable (rarama) uye inogadzikana ISO mufananidzo iyo inogona kushandiswa senzvimbo yekudzoreredza, svikiro rekuchengetedza uye / kana kugoverwa zvekare GNU / Linux Distribution, pakati pezvimwe zvinoshandiswa. Uye izvo zvinovakwa kubva kuIOO kana kuisirwa kweiyo iripo GNU / Linux Distro. Panyaya yeMX Linux, pane MX Snapshot, chinova chishandiso chakanakira ichi chinangwa, uye inova chinzvimbo chemazuva ano uye chinoshanda cheimwe maturusi ekare, senge «Remastersys y Systemback», asi izvo zvinongoshanda chete paMX Linux." MX Snapshot: Ungagadzira sei wega uye inogadzirika MX Linux Pindura?
Nezve MX Linux
Uye kune avo vasingazive kana kushandisa «MX Linux » tinokurudzira kuongorora kwedu kwakatevera zvakapfuura zvinyorwa pane zvakadaro Kugoverwa kweGNU / Linux, kuitira kuti vazive uye vaone kugona kwayo kunonakidza, uko kusingagumiri kune kusikwa kweMhinduro:
"MX Linux ndiwena Distro GNU / Linux yakaitwa mushandira pamwe pakati penharaunda dze antiX neMX Linux. Uye icho chikamu chemhuri yeAinoshanda MaSystem ayo akagadzirirwa kusanganisa inoyevedza uye anoshanda madhiraivha ane hwakasimba kugadzikana uye kwakasimba kuita. Zvishandiso zvaro zvinopa nzira iri nyore yekuita akasiyana siyana mabasa, nepo Live USB uye snapshot maturusi nhaka kubva antiX inowedzera inoyevedza portability uye yakanakisa yekumisikidza kugona. Uye zvakare, ine rwakakura rutsigiro runowanikwa kuburikidza nemavhidhiyo, zvinyorwa uye neushamwari kwazvo foramu.".
MX Linux: Inoenderera Mberi Kutungamira iyo DistroWatch Chinzvimbo nekumwe Kushamisika
Zvishamiso GNU / Linux: Yega (isiriyo) wongororo yeMX Linux
Chii chinonzi MilagrOS?
El Pindura «Zvishamiso GNU / Linux» sekutaura kwake zviri pamutemo webhusaiti akadanwa "Tic Tac Chirongwa" inotevera:
Chii chitsva mune yazvino vhezheni yeMilagrOS GNU / Linux?
Zvakajairika maficha uye zvinangwa
Kazhinji, akadaro Respin ane hunhu hunotevera uye zvakajairika zvinangwa, kune ese maBhaibheri ayo:
Wide akasiyana mapakeji (firmware, maraibhurari uye zvishandiso) zvechinangwa, uye nezvezvinangwa chaizvo, senge, madhiraivha ehurdware (LAN neWiFi netiweki, maPrinta nemaMultifunctional) uye maapplication ehofisi nekushandisa kwehunyanzvi, multimedia uye gamer, uye kuchera kwedigital.
Kurongeka kwakanaka uye optimizations, Yayo yepasi CPU uye RAM yekushandisa pakutanga, pamwe nekutsanya kwayo uye kudzima.
Zvinokwezva zvaunofarira yenzvimbo dzako dzakasiyana dzeDesktop (DEs) uye Mahwindo ma maneja (WMs), akatobatanidzwa, akaiswa uye akagadziriswa.
Zviri nyore kupinda, zvinoenderana nekuravira kwemushandisi uye zvinodiwa nekombuta yakashandiswa, kuburikidza nechero rayo akasiyana maDesktop Environments (DEs) uye Windows Administrators (WMs).
Sevha nguva mune zvakajairika maitiro, senge: kumisikidzwa kwenguva refu, kumisikidza uye kugadzirisa kweiyo Inoshanda Sisitimu, pamwe nenguva yakakosha mukumisikidza uye maitiro ekugadzirisa maitiro.
Dzivisa kushandiswa kwekutanga kweInternet, kuva neGNU / Linux Distro yakakwana uye inoshanda.
Gonesa kufanana kweLinux kushandiswaNdiko kuti, kugona kuve neiyo imwecheteyo GNU / Linux Distro ine kumisikidza kumwe pamakomputa akasiyana, pamwe nekugona kuitakura kwese mukati me USB Drive, zvese seDistro yekushandisa mazuva ese uye seRununuro uye Gadzirisa Distro.
Chekupedzisira vhezheni 2.3 (3DE4) Yekupedzisira, yakaburitswa zviri pamutemo pa 01 / 05 / 2021, uye ine nhau dzinotevera maererano neyakare yapfuura mhando 2.2 (3DE3) Omega:
Pasina mapakeji akasanganisirwa, senge: adobe-flashplugin, anydesk, atmel-firmware, blender, caliber, clamav, codeblocks, kusawirirana, kubuda, flatpak (chete maapplication ako uye akaisa zvinhu kwete iyo app), gnome-mabhokisi, librecad, lxc, krita, kdenlive, papirus- ma icon-madingindira, kukwenya, thunderbird, uuid-dev uye uuid-runtime, virt-maneja, waini, pakati pemamwe maapplication nemaraibhurari.
Mapakeji nyowani akasanganisirwa, senge: atomicwallet, byobu, dvdstyler, dvdisaster, gamemode, google-chrome, gpodder, intel-gpu-zvishandiso, libcurl4-openssl-dev, libgl1-mesa-glx, libqt5websockets5, linux-firmware, multidoge, python-newt, python-setuptools , pywall, screen, simplescreenrecorder, smart-notifier, muti, zvakasiyana, xorg-server-sosi, zenmap.
New Window Manager inosanganisirwa: Zvino inosanganisira IceWM, pamwe FluxBox, OpenBox uye I3WM. Uye enzvimbo dzeDesktop: XFCE, Plasma uye LXQT.
Imwe chete yekugadzirisa pane diki ISO: Shanduro 2.3 (3DE4) Yekupedzisira ikozvino inouya mune imwe chete 3.2 GB ISO (+/- 3.4 GB net), kusiyana neyakange yapfuura vhezheni 2.2 (3DE3) yakauya muzvinyorwa zviviri, iyo ISO Full kudana +/- 4.4 GB Omega uye ISO Lite kudana +/- 2.2 GB Alpha.
Dhawunirodha, Kuisa, Shandisa uye Screenshots
Zvinoenderana neayo webhusaiti yepamutemo, yatotaurwa, ayo maratidziro ekurodha ndeaya anotevera:
Dhawunirodha MilagrOS 2.3 uye 2.2 -> GDrive - Mega
Dhawunirodha MilagrOS 2.0 uye 2.1 -> Mega
Unogona zvakare kuedza «MilagrOS GNU / Linux» pane DistroTest webhusaiti nekudzvanya pane inotevera link. Edza MilagrOS GNU / Linux 2.X pamhepo paDistroTest.
Kuiswa kwaro uye kushandiswa kwakawanda kwakangofanana nechero ipi «MX Linux », saka zvichave zvakakwana kuti uone chero bhuku kana kuisa uye shandisa vhidhiyo pane zvataurwa GNU / Linux Distro. Musiyano chaiwo ndewekuti «MX Linux » inouya chete ne XFCE, kana Plasma kana FluxBox, ari mukati "Zvishamiso GNU / Linux" unogona kushandisa chero akasiyana ayo DEs uye WMs.
Naizvozvo, kana yaiswa, "Zvishamiso GNU / Linux" inogona kutanga nechero yayo akasiyana DEs uye WMs, sezvakaratidzwa pasi apa:
A.- XFCE Desktop Nzvimbo
B.- Plasma Desktop Nharaunda
C.- LXQT Desktop Nzvimbo
D.- IceWM Windows Maneja
E.- FluxBox Windows Maneja
F.- OpenBox Windows Maneja
Kupindura kana Distros?
Sezvauri kuona, a Pindura yakagadzirwa ne MX Linux kana Antix inogona kuva a yakanaka imwe nzira kune avo tanga muLinux nyika kana kuva nazvo kugona kushoma kwekuisirwa, kugadzirisa uye kugadzirisa maitiro a GNU / Linux Distro, zvakaita se, MX Linux kana Antix yakachena kana imwe Distros senge Debian GNU / Linux, nekuti, kunyangwe iri yakanaka kwazvo, kazhinji inoda iyo internet kuti iite inogutsa yakazara kuisirwa pamwe neyakareba nguva yekumisikidza, kumisikidza, kugadzirisa uye kugadzirisa.
Un Pindura ine mukana wekugona kugadzirwa pa kudiwa kwemushandisi, boka renharaunda kana sangano, kudzikisira kushandiswa kweinternet kumisikidzwa kubudirira pane imwechete kana mhando dzinoverengeka dzemakomputa, uye kudzikisira mutengo wemaawa / basa uye kufarira kufanana mune zvese kuiswa.
Panguva, a GNU / Linux Distro yakachena se Debian, Ubuntu, Mint uye mamwe anowanzo yakakwana kana yakanaka kune avhareji kana epamberi vashandisi muLinux nyika, nekuti ivo vanongounza izvo zviri zvishoma zvinodikanwa mune diki ISO saka zvakanzi mushandisi anovaka kubva kune yakasimba base uye neInternet zvese zvinodiwa, zvese zvemakomputa uye sevha, kana zvichidikanwa.
Uye zvakare "Zvishamiso GNU / Linux" yakavakirwa yemazuva ano 64 Zvishandiso yezvishoma kana zviwanikwa zviwande, iwe unogona kuita Mhinduro na MX Linux kana Antix nokuti macomputer e32-bit yezvishoma kana kudzikiswa zviwanikwa, senge, Anopindura kudaidzwa «Loc-OS» y Cereus.
Chekupedzisira, kana iwe wakafarira zvese izvi zvikonzero, tinokukoka kuti uongorore ichi chimwe chinyorwa chekare chakabatana:
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" about «MilagrOS» GNU / Linux, Inonakidza uye yemazuva ano Respin (inorarama uye inogadzikana uye yakasarudzika snapshot) yakavakirwa pa «MX Linux », iyo inouyawo ne kunyanyisa kugadzirisa uye kugadzirisa, izvo zvinoita kuti ive yakanakira "64 Bit" makomputa yechero gadziriso; ndeyekufarira kukuru uye kushandiswa, kweiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » GNU / Linux Zvishamiso: Nyowani respin inowanikwa! Kupindura kana Distros?
Kutaura kuti izvi zvingave zvirinani pane debian, ndiko kuve anonyanyisa uye kuziva zvishoma kwazvo nezveLinux. Mxlinux is a distro is not bad, I had it installed for a few months and I ended up uninstalling it, because it is a distro that still has a lot to polish, ine zvinoramba zvichikundikana zvekuti pakupedzisira bata mabhora ako, semuenzaniso usb yaigara yakashanda mushe uye husiku haina kuvaziva uye nezvimwe zvinhu zvaigara zvichifamba mushe uye iwe usati waita chero chinhu kune iyo distro yakangoerekana yatadza. Mune imwe pc ndanga ndiine debian kuyedzwa kwe3 makore uye mumakore matatu zuva racho harisati rauya apo ini ndisina kana dambudziko rimwe uye ndiko kuedza kwedhiian, uko kunofanirwa kunge kuri kuyedza uye bua hakuna kugadzikana uye kwakadaro, hapana kupfuurirazve Kubva pachokwadi, kusaziva kwakachena, ndakave nematambudziko akawanda nedebian yakagadzikana pane kuyedzwa kwedhibian uye ndinoziva vanhu vakapedza makore makumi maviri vachitsvaga nekuongororwa kwedhibi uye kwete kana dambudziko rimwe chete, debian yakawanda yedhiri. Izvozvi xubuntu irinani kupfuura mxlinux neLinux mint, mxlinux ndakaitsiva ne xubuntu uye ndicho chinhu chakanakisa chandakaita uye ichi chaunopa pano hachisi chinhu chinopfuura nguva bhomba rakaremerwa nezioni zviuru zvezvinhu, uye mxlinux iwe unopedza hafu hupenyu hwako kusunungura zvinhu zvakawanda zvisina basa, nekuti kana ukaita kuti zvikure, dzima tiende, zvisina maturo, izvi ndizvo anti anti.
Kwaziso, Antidistro. Ndatenda nekutaura kwako. Mukupindura kune zvawakaratidza, ini ndashandura uyu mutsara zvishoma, nekuti zvirokwazvo Respin inogona kuve yakanakisa imwe nzira kune avo vanotanga muLinux nyika kana vane zvishoma kuraira kwekumisikidza, kugadzirisa uye kugadzirisa maitiro eGNU Distro / Linux , senge nyanzvi kana asiri-Windows mushandisi, nepo yakachena GNU / Linux Distro yakadai seDebian, Ubuntu, Mint uye dzimwe dzinowanzo kuve dzakakwana kana dzakanakira vashandisi vepakati kana vemberi muLinux World, nekuti, ivo vanongounza izvo zvishoma zvichidikanwa. mune ISO diki kuitira kuti, akadaro mushandisi anovaka kubva kune yakasimba base uye neInternet zvese zvinodiwa, zvese zvecomputer uye zveseva, kana zvichidikanwa.
Kana ichingo shanda pane yakasarudzika distro, kushomeka kushoma kune respin.
Kwaziso, Diego. Ndatenda nekutaura kwako. Uye zvirokwazvo, ngativimbei kuti iyo MX Snapshot chishandiso inova yepasirese kune imwe GNU / Linux Distros. Nekudaro, kune nzira dzinoverengeka (maturusi) anowanikwa kunyangwe asiri eunyanzvi kana nyore kushandisa, senge Linux Pindura (https://linuxrespin.org/) uye RemasterSys. Iyo yekupedzisira, ndakamboishandisa kare, paUbuntu 18.04 uye ndakaita yakanaka kwazvo inogadzikana yekufema. Uye zvechokwadi, nguva dzose kune avo vanofambira mberi, ndeyekushandisa iyo LFS (Linux Kubva kuKutanga) kubva pakutanga, gadzira yako wega tsika Distro kune yako kufarira. Ndinovimba, zvichikundikana izvo, yega yega GNU / Linux Distro ichaburitsa chayo chayo kugadzira Mhinduro.
Hummm, ini ndinonamira neyangu Mint 20 linux inoshanda mushe, hongu kana iri yeavo vanotanga muLinux zvakanaka, pane imwe distro iyo kune avo vanotanga muLinux vanoizoida nekuda kwekushanda kwayo uye inouya nezvose zvakagara zvaiswa, iri Zorin. maererano
Kwazisai, Octavio. Ndatenda nekutaura kwako. Zvirokwazvo, kushandiswa kwepinini kunoitwa kubva kune chero GNU / Linux Distro, uye yakagadzirirwa munhu, boka, nharaunda kana sangano rine mabhenefiti mazhinji, kunyanya kune avo vari kutanga munyika ino yeFree Software, Open Source uye GNU / Linux. Uye nezveZorin, ini ndinofunga inoshamisa uye yakanaka distro, kunyanya kune vatsva uye vanotanga.
Ini ndinoda Milagros GNU / Linux, asi ine dambudziko senge MX-LINUX mamaboard, iyo Flatpak. Kana iwe ukaedza kuisa chero pasuru kuburikidza neFlatpak, imwe inotora husingagumi uye maviri, inopwanya PC kwenguva pfupi isina kana kukwanisa kuvhura Thunar kwenguva pfupi.
Kwaziso, Aranqoti. Ndatenda nekutaura kwako. Ini handina kuyedza flatpak pane mamwe maDistros, sezvo ndanga ndichishandisa MX Linux neMilagrOS kwemakore matatu. Asi, ndisingazive kuti kumisikidzwa kweplatpak package kunotora pavhareji, ndinonzwa kuti paMX Linux / MilagrOS inotora nguva yakati rebei.
Zvakanaka, vanobhururuka, ini handizive chaizvo kuti dambudziko riripi, asi ini ndatoona mumaforamu kuti chinhu chimwe chete ichi chinoitika neMX-LINUX neMilagrOS, uye ini handina kuona mhinduro uye zvinonyadzisa, sezvo FLATPAK iri zvakapararira mazuva ese uye iwe unobvumidza kuisa yazvino vhezheni yezvakawanda zvinoshandiswa
Zvirokwazvo. Uye hongu, Flatpak inovimbisa yakawanda ichienzaniswa neSnap. Uye AppImage iri muhondo yekuzviisa pachayo.
Ini ndaisa iyi Respin pane yakanyatsogadziriswa AMD E1-2500 laptop ine 4GB yegondohwe. Ichokwadi ndechekuti iri kufamba mushe, timu iri agile. Pakombuta iyi ini ndanga ndamboisa Mx-Linux ne KDE (ini ndinoshandisa iyo imwechete desktop muMilagrOS) uye kumhanya kwekomputa kwaishungurudza.
Chinangwa changu pamusoro penguva ndechekuisa Debian ne KDE pakombuta iyoyo, asi ini handizive kana ndikazowana hunyanzvi uhwo hwave nahwo neMilagrOS. Ini handizive kana iwe uchigona kugadzira diki gwara kana dzidziso yeaya «Kugadziriswa kwakanaka uye optimizations, kune ayo mashoma mashandisirwo eCPU uye RAM kana uchitanga, pamwe nekutsanya kwayo kuvhura uye kudzima» izvo iwe zvawakaita mune iyi Respin, sezvo zvichinyatso kuoneka, kana zvirinani pakombuta yangu zvinoonekwa.
Ndatenda zvikuru nebasa renyu 🙂
Kwaziso, Kirulo! Ndatenda nekutaura kwako. Pakati pezvizhinji zvezvakawanda zvakagadziridzwa zvakagadzirwa muMilagrOS isu tinoshandisa Preload uye Prelink, pamusoro peDeborphan neLocalepurge. Asi, zvirinani, maapplication mazhinji, maraibhurari uye mawedzero akaiswa, uye zvinove nechokwadi chekuti izvo chete zvinodikanwa zvinotakurwa mundangariro kana uchitanga, ndiko kuti, kuremadza masevhisi. Kuti tiite izvi, tinokanganisa izvo zvisina kudikanwa pakutanga tichishandisa "Session uye Kutanga" sarudzo yeXFCE uye iyo Stacer app. Zvakare, MilagrOS inoshandisa iyo AHS vhezheni yeMX Linux, asi neiyo yekare kernel yekuenderana kwakawanda nekwakadzika-zviwanikwa makomputa. Ini ndinokurudzira iwe kuti uongorore iyi yapfuura kutumira kuti uone iyo yekugadzirisa chinhu: https://blog.desdelinux.net/como-optimizar-gnu-linux/
Tsanangudzo pamatehwe akaunzwa neYunivhesiti yeMinnesota yakaziviswa